सूचना- QIANGSHENG MAGNETS CO।, LTD
स्थायी चुम्बक आधुनिक जीवनको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। तिनीहरू आज फेला परेका छन् वा आज प्राय: आधुनिक सुविधाको उत्पादन गर्नका लागि प्रयोग गरिन्छ। पहिलो स्थायी चुम्बक लोडेस्टोन भनिने प्राकृतिक रूपमा हुने चट्टानहरूबाट उत्पादन गरिएको थियो। यी ढु stones्गाहरु पहिलो पटक २ 2500०० वर्ष अगाडि चिनियाँहरु द्वारा अध्ययन गरिएको थियो र युनानीहरु द्वारा जसले यो ढुtes्गालाई मग्नेट्स प्रान्तबाट प्राप्त गर्‍यो, जहाँबाट उक्त सामग्रीलाई यसको नाम दिइयो। त्यसबेलादेखि, चुम्बकीय सामग्रीहरूका गुणहरू गहन रूपमा सुधार गरिएको छ र आजको स्थायी चुम्बक सामग्री पुरातनताको म्याग्नेट भन्दा सयौं गुणा शक्तिशाली छ। स्थायी चुम्बक शब्द चुम्बकीय उपकरणबाट हटाएपछि यसलाई प्रेरित चुम्बकीय चार्ज राख्नको क्षमताबाट आउँदछ। त्यस्ता उपकरणहरू अन्य कडा चुम्बकीय स्थायी चुम्बक, इलेक्ट्रो म्याग्नेट वा तारको कुण्डलहरू हुन सक्छन् जुन छोटो रूपमा बिजुली चार्ज हुन्छ। चुम्बकीय चार्ज राख्ने तिनीहरूको क्षमताले तिनीहरूलाई स्थानमा वस्तुहरू समाहित गर्न, बिजुलीलाई गतिशील शक्ति र यसको विपरित (मोटर्स र जेनरेटर) मा रूपान्तरण गर्न, वा उनीहरूको नजिक ल्याइएको अन्य वस्तुहरूलाई असर गर्न उपयोगी गर्दछ।
उत्कृष्ट चुम्बकीय प्रदर्शन राम्रो चुम्बकीय ईन्जिनियरिंगको कार्य हो। ग्राहकहरूलाई जसलाई डिजाइन सहायता वा जटिल सर्किट डिजाइनहरू आवश्यक पर्दछ, QM को अनुभवी अनुप्रयोग ईन्जिनियरहरू र जानकार क्षेत्र बिक्री ईन्जिनियरहरूको टीम तपाईंको सेवामा छ। QM ईन्जिनियरहरु ग्राहकहरु संग अवस्थित डिजाइनहरु लाई सुधार गर्न वा मान्य गर्न को लागी उपन्यास डिजाइनहरु विकास गर्न को लागी काम गर्दछ जसले विशेष चुम्बकीय प्रभाव उत्पादन गर्दछ। QM प्याटेन्टेड म्याग्नेटिक डिजाइनहरू विकास गरेको छ जुन अत्यन्त शक्तिशाली, एकसमान वा विशेष आकारको चुम्बकीय क्षेत्रहरू प्रदान गर्दछ जुन अक्सर भारी र अक्षम इलेक्ट्रो-चुम्बक र स्थायी चुम्बक डिजाइन प्रतिस्थापन गर्दछ। ग्राहकहरू ढुक्क हुन्छन् जब ए एक जटिल अवधारणा वा नयाँ विचार ल्याउँदछ QM १० वर्षको ثابت चुम्बकीय विशेषज्ञताको रेखाचित्र द्वारा त्यो चुनौतीको सामना गर्नेछ। QM मानिस, उत्पादन र प्रविधि हो जसले म्याग्नेटलाई काममा लगाउँदछ।
सबै अनुप्रयोगहरूको लागि चुम्बकीय चयनले सम्पूर्ण चुम्बकीय सर्किट र वातावरणलाई विचार गर्नुपर्छ। जहाँ Alnico उपयुक्त छ, चुम्बकीय आकार कम गर्न सकिन्छ यदि यो चुम्बकीय सर्किटमा सम्मेलन पछि चुम्बकीय गर्न सकिन्छ। यदि अन्य सर्किट कम्पोनेन्टहरू स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गरियो भने, सुरक्षा अनुप्रयोगहरूमा जस्तै, व्यास अनुपात (पारगम गुणांकसँग सम्बन्धित) को लागी प्रभावी लम्बाई यसको दोस्रो क्वाड्रन्ट डिमेग्नेटाइजेशन कर्भमा घुँडा टेक्नको लागि पर्याप्त हुनुपर्दछ। महत्वपूर्ण अनुप्रयोगहरूको लागि, Alnico म्याग्नेटलाई स्थापित सन्दर्भ फ्लक्स घनत्व मानमा क्यालिब्रेट गर्न सकिन्छ।
बाह्य चुम्बकीय क्षेत्रहरू, झटका, र अनुप्रयोग तापक्रमको कारण डेमग्नेटाइजिंग प्रभावहरूको प्रति संवेदनशीलता कम कम बेरोजगारीको एक उप-उत्पाद हो। आलोचनात्मक अनुप्रयोगहरूको लागि, एल्निको म्याग्नेट तापमान कम गर्न यी प्रभावहरू कम गर्न सकिन्छ आधुनिक व्यावासायिक म्याग्नेटका चार वर्ग छन्, प्रत्येक तिनीहरूको सामग्री संरचनाको आधारमा। प्रत्येक वर्ग भित्र आफ्नै चुम्बकीय गुणहरु सहित ग्रेड को एक परिवार छ। यी सामान्य वर्गहरू हुन्:
नियोडियमियम आइरन बोरन
NdFeB र SmCo सामूहिक रूपमा दुर्लभ पृथ्वी मैग्नेट भनेर चिनिन्छ किनकि ती दुबै दुबै Rare Earth समुहका सामग्रीहरूबाट बनेका छन्। नियोडियमियम आयरन बोरन (सामान्य संरचना Nd2Fe14B, प्रायः NdFeB मा संक्षिप्त गरिएको) आधुनिक चुम्बक सामग्रीको परिवारमा सबैभन्दा भर्खरको व्यावसायिक थप हो। कोठाको तापक्रममा, NdFeB म्याग्नेटले सबै चुम्बक सामग्रीको उच्च गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ। सामरियम कोबाल्ट दुई रचनाहरूमा निर्मित छ: Sm1Co5 र Sm2Co17 - अक्सर SmCo १: or वा SmCo २:१:1 प्रकारहरू भनेर चिनिन्छ। २:१:5 प्रकारहरू, उच्च एचसीई मानहरूको साथ, १: types प्रकारहरू भन्दा ठूलो अन्तर्निहित स्थिरता प्रदान गर्दछ। सिरेमिकलाई फेराइट भनेर पनि चिनिन्छ, म्याग्नेट (सामान्य संरचना BaFe2O17 वा SrFe2O17) १ 1 s० पछि व्यावसायिकिकरण गरिएको छ र तिनीहरूको कम लागतका कारण आज व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न जारी छ। सिरेमिक चुम्बकको एक विशेष रूप "फ्लेक्सिबल" सामग्री हो, सिरेमिक पाउडरलाई लचिलो बाइन्डरमा बाँधेर बनाइएको। Alnico म्याग्नेट (सामान्य संरचना Al-Ni-Co) १5.० को दशकमा व्यावसायिकिकरण गरिएको थियो र अझै व्यापक रूपमा प्रयोग भएको छ।
यी सामग्रीहरूले गुणहरूको दायरा विस्तार गर्दछ जुन अनुप्रयोग आवश्यकताहरूको एक विस्तृत विविधता समायोजित गर्दछ। निम्नलिखित कारकहरूको एक विस्तृत तर व्यावहारिक सिंहावलोकन दिनको लागि हो जुन विशेष अनुप्रयोगको लागि उपयुक्त सामग्री, ग्रेड, आकार र चुम्बकको आकार छनौटमा विचार गर्नुपर्दछ। तलको चार्टले तुलनाको लागि विभिन्न सामग्रीहरूको चयनित ग्रेडको लागि मुख्य विशेषताहरूका विशिष्ट मानहरू देखाउँदछ। यी मानहरू निम्न खण्डहरूमा विस्तृत रूपमा छलफल गरिनेछ।
चुम्बक सामग्री तुलना
टी अधिकतम (डिग्री सी) *
* टी अधिकतम (अधिकतम व्यावहारिक अपरेटिंग तापमान) केवल सन्दर्भको लागि हो। कुनै पनि चुम्बकको अधिकतम व्यावहारिक अपरेटिंग तापमान सर्किटमा निर्भर हुन्छ जुन चुम्बकले सञ्चालन गरिरहेको छ।
म्याग्नेटलाई कोप्ट गर्न आवश्यक पर्दछ जुन अनुप्रयोगहरूमा निर्भर गर्दछ जसको लागि तिनीहरू अभिप्रेत छन्। कोटिंग म्याग्नेटले उपस्थिति, जंग प्रतिरोध, पोशाकबाट सुरक्षा सुधार गर्दछ र सफा कोठा सर्तहरूमा अनुप्रयोगहरूको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
सामरियम कोबाल्ट, Alnico सामग्री संक्षारण प्रतिरोधी हो, र क्षति विरुद्ध लेप गर्न आवश्यक छैन। Alnico सजीलो कोस्मेटिक गुणहरु को लागी प्लेट गरीन्छ।
NdFeB म्याग्नेट विशेष रूपले क्षरणको लागी संवेदनशील हुन्छ र प्राय जसो यस तरीकाले सुरक्षित गरिन्छ। त्यहाँ स्थायी चुम्बकका लागि उपयुक्त कोटि ofहरू छन्, सबै प्रकारका कोटिंगहरू प्रत्येक सामग्री वा चुम्बक ज्यामितिका लागि उपयुक्त हुँदैनन्, र अन्तिम विकल्प अनुप्रयोग र वातावरणमा निर्भर हुन्छ। अतिरिक्त विकल्प भनेको चुम्बकलाई बाहिरी केसिंगमा स house्ग्रह र क्षति रोक्नको लागि हो।
आर्द्रता विरुद्ध उत्कृष्ट
नी + क्यू + नी
नुन स्प्रे विरुद्ध राम्रो
साल्ट स्प्रे विरुद्ध उत्कृष्ट
नी + घन + स्न
आर्द्रताको बिरूद्ध सुपीरियर
नी + क्यू + औ
नी + घन
कालो, रातो, खरानी
नी + घन + इपोक्सी
Zn + इपोक्सी
आर्द्रता विरुद्ध उत्कृष्ट, नुन स्प्रे। सल्भेन्ट्स, ग्यास, फन्गी र ब्याक्टेरिया बिरूद्ध सुपीरियर।
स्थायी चुम्बकलाई दुई सर्तहरू अन्तर्गत आपूर्ति गरियो, चुम्बकीय वा कुनै म्याग्नेटाइज गरिएको छैन, प्राय: यसको ध्रुवीयताको रूपमा चिन्ह लगाइदैन। यदि प्रयोगकर्तालाई आवश्यक भएमा, हामी सहमत छौं औजार द्वारा ध्रुवीकरणलाई चिन्ह लगाउन सक्छौं। अर्डर प्याकिंग गर्दा, प्रयोगकर्ताले आपूर्ति सर्तमा सूचित गर्नुपर्दछ र यदि ध्रुवीकरणको चिन्ह आवश्यक छ भने।
स्थायी चुम्बकको चुम्बकीय क्षेत्र स्थायी चुम्बकीय सामग्री प्रकार र यसको आन्तरिक बलात्कार बल संग सम्बन्धित छ। यदि चुम्बकलाई म्याग्नेटाइजेशन र डिमेग्नेटाइजेशन आवश्यक छ भने, कृपया हामीसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र प्राविधिक समर्थनको लागि सोध्नुहोस्।
चुम्बकलाई म्याग्निटाइज गर्न दुई तरिकाहरू छन्: DC क्षेत्र र नाडी चुम्बकीय क्षेत्र।
चुम्बकलाई डिमेग्नेटाइज गर्ने तीन तरिकाहरू छन्: ताप द्वारा डिमेग्नेटाइजेशन एक विशेष प्रक्रिया प्रविधि हो। एसी फिल्डमा demagnetiization। डीसी फिल्डमा Demagnetiization। यसले धेरै कडा चुम्बकीय क्षेत्र र उच्च डिमेग्नेटाइजेशन कौशलको लागि सोध्दछ।
ज्यामिति आकार र स्थायी चुम्बकको चुम्बकीय दिशा: सिद्धान्तमा, हामी विभिन्न आकारहरूमा स्थायी चुम्बक उत्पादन गर्दछौं। सामान्यतया, यसले ब्लक, डिस्क, घण्टी, खण्ड आदि समावेश गर्दछ। म्याग्नेटाइजेशन दिशाको विस्तृत चित्रण तल छ:
(आधिकारिक दिशानिर्देशन को निर्देशित रेखाचित्र)
मोटाई को माध्यम बाट उन्मुख
अस्थिमुखि क्षेत्रहरु मा उन्मुख
एक अनुहारमा पछिल्लो रूपमा बहुपक्षीय उन्मुख
बाह्य व्यासमा क्षेत्रहरूमा बहुपक्षीय उन्मुख
बहुमुखी एक अनुहार मा क्षेत्रहरु मा उन्मुख
रेडियली उन्मुख *
व्यास मार्फत उन्मुख *
भित्री व्यासमा क्षेत्रहरूमा बहुमुखी
सबै isotropic वा anisotropic सामग्री को रूपमा उपलब्ध
* केवल isotropic र केहि anisotropic सामग्री मा उपलब्ध
म्याग्नेटाइजेशनको दिशामा आयाम बाहेक, स्थायी चुम्बकको अधिकतम आयाम mm० मिमीभन्दा बढी हुँदैन, जुन अभिमुखिकरण क्षेत्र र सिन्ट्रि equipment उपकरणहरूले सीमित गर्दछ। Unmagnetiization दिशा मा आयाम 50mm को छ।
सहिष्णुता सामान्यतया +/- ००0.05 - +/- ०.०१ मिमि हुन्छ।
टिप्पणी: अन्य आकारहरू ग्राहकको नमूना वा निलो प्रिन्टको अनुसार निर्माण गर्न सकिन्छ
१. चुम्बकीय क्षेत्रको चुम्बकीय स्थायी चुम्बकले फलाम र अन्य चुम्बकीय मामिलालाई उनीहरूको वरिपरि धेरै आकर्षित गर्दछ। सामान्य अवस्था अन्तर्गत, म्यानुअल अपरेटर कुनै पनि क्षतिबाट जोगिन धेरै सावधान हुनुपर्छ। बलियो चुम्बकीय शक्तिको कारण, तिनीहरू नजिकको ठूलो चुम्बकले क्षतिको जोखिम लिन्छ। व्यक्तिहरू यी म्याग्नेटहरू सधैं छुट्टै वा क्लेम्प्स द्वारा प्रक्रिया गर्दछन्। यस अवस्थामा, हामीले सञ्चालनमा सुरक्षा ग्लोभहरू राख्नु पर्छ।
२. कडा चुम्बकीय क्षेत्रको यस अवस्थामा कुनै पनि संवेदनशील इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट र परीक्षण मिटर बदल्न वा बिग्रन सक्छ। कृपया यसलाई हेर्नुहोस् कि कम्प्युटर, प्रदर्शन र चुम्बकीय मिडिया, उदाहरणका लागि चुम्बकीय डिस्क, चुम्बकीय क्यासेट टेप र भिडियो रेकर्ड टेप आदि, चुम्बकीय उपकरणबाट टाढा छन्, २ मीटर भन्दा टाढा भन्नुहोस्।
Two. दुई स्थायी चुम्बकहरु बीच आकर्षण शक्ति को टक्कर भारी स्पार्कलहरु ले आउँछ। त्यसकारण, ज्वलनशील वा विस्फोटक पदार्थ तिनीहरूका वरिपरि राख्नु हुँदैन।
When. जब चुम्बकलाई हाइड्रोजनको संपर्कमा पर्दछ, सुरक्षा कोटिंग बिना स्थायी चुम्बक प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। यसको कारण यो छ कि हाइड्रोजनको बिघटनले चुम्बकको सूक्ष्म संरचनालाई नष्ट गर्दछ र चुम्बकीय गुणहरूको विनिमयको लागि नेतृत्व गर्दछ। प्रभावी ढ the्गले चुम्बकलाई जोगाउने एक मात्र तरीका भनेको केसमा चुम्बकलाई बन्द गरेर मुहर लगाईन्छ।